खाना खाँदा पानी पिउनु फाइदा कि बेफाइदा ? पूरा पढ्नु होस ।। - Gorkhali Post
मुख्य पृष्ठ /स्वास्थ्य/ जिबनशैली/खाना खाँदा पानी पिउनु फाइदा कि बेफाइदा ? पूरा पढ्नु होस ।।
मानिसहरू भन्छन् खाना खाँदा पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ । खानासँग पानी पिउनाले शरीरमा टक्सिन जम्मा हुन्छ । जसकारण मानिस बिरामी पनि पर्न सकिन्छ ।
खाना खाँदाखेरी पानी पिउने कि नपिउने भन्ने विषयमा दुईमत पाइन्छ । खाना खाँदा पेटबाट एसिड निस्कन्छ र यसैले खाना पचाउँछ । पानी पिउँदा त्यो एसिड पातलिएर त्यसले राम्रो काम गर्न पाउँदैन । धेरैजसो मानिसको मान्यता यस्तो छ ।
तर यो सही होइन । धेरैथरी मेडिकल स्टडीहरूका अनुसार, खाना खाँदाखेरी पानी पिउँदा पेटको पीएच स्तरमा विशेष फरक पर्दैन । त्यसो त खाना खाँदा पानी पिएमा खाना मज्जाले पच्छ भन्ने धारणा पनि छ ।
तर यो पूर्ण सत्य होइन । पाचन एक जटिल प्रक्रिया हो र यसमा धेरै तत्त्वले एकैचोटि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पानीको मात्र त्यसमा भूमिका हुने होइन । खाना खाँदाखेरी पानी पिउँदा तपाईंलाई कब्जियतको समस्या हुँदैन किनकि पानीले शरीरको विषाक्त पदार्थ बाहिर निकाल्छ र पाचन प्रणालीलाई चिल्लो बनाउँछ ।
पानीमा भएको पोषक तत्त्व पनि खानासँग जोडिन पुग्छ । तर त्यसो भन्दैमा खाना खाँदै गर्दा एकदमै धेरै पानी पिउन भने हुँदैन ।
के खानासँगै पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक होला त ?
स्वास्थ्य विज्ञका अनुसार खानासँगै पानी पिउनाले स्वास्थ्यमा कुनै नकारात्मक असर पर्दैन । वास्तवमा सबै खानेकुरा खाँदा पानी पिउनुपर्छ । यसो गर्नाले पाचन प्रक्रियामा सहयोग मिल्छ । विज्ञ भन्छन्– शरीरका लागि पानी निकै महत्त्वपूर्ण छ । शरीरलाई हाइड्रेटेड राख्न सकेसम्म पानी पिउनुपर्छ ।
डाक्टरका अनुसार कुनै पनि खानेकुरा खाँदा पानी पिउनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले बिल्कुल सुरक्षित छ । तर, सबै खानेकुरा खाइसकेपछि तुरुन्तै पानी पिउनबाट बच्नुपर्छ । शरीरमा भएको इन्जाइम ग्यास्टिक जुस, प्यांक्रियाज र अन्य केमिकलले खाना पचाउन सहयोग गर्छ ।
तर, खानापछि तुरुन्तै पानी पिउँदा यो सबै इन्जाइम पानीसँग मिलेर पाचन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउँछ । साथै, शरीरमा भएको पोषण तत्वलाई पनि सही ढंगले काम गर्न दिँदैन ।
आयुर्वेद विज्ञका अनुसार खाना खाँदा सँगै पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि असरदार हुँदैन । तर, सबै खानेकुरा खानुअघि वा खाइसकेपछि तुरुन्तै पानी पिउनुहुँदैन । किनकि यसले शरीरको पाचन प्रक्रियामा असर गर्छ ।
खानासँगै पानी पिउनाले पेटमा भएको एसिड पनि पानीसँगै मिसिन्छ । र, यसबाट कब्जियतको समस्या दूर हुन्छ । यसबाहेक पेट पनि छिटै भरिन्छ । र, आराम पनि मिल्छ । जुन कुरा स्वाथ्यका लागि राम्रो हो ।
तर, खानासँगै पानी पिउनुको मतलब एकैपटक धेरै पानी पिउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन । पटक–पटक गरेर एक गिलास पानी बिस्तारै पिउनुपर्छ । खाना खाएको करिब आधा घन्टापछि मात्रै पानी पिउनु राम्रो हुन्छ ।
किनकि हामीले खाएको खाना पचाउन शरीरलाई दुई घन्टा लाग्छ । जब खाना पाचन प्रक्रियामा रहेको हुन्छ, तब शरीरमा तरल र ठोस पदार्थको एक निश्चित अनुपात बनिरहनु आवश्यक हुन्छ । यदि हामीले खाना खाएपछि पानी पियौँ भने यो अनुपात बिग्रिन्छ ।
धेरैजसो डाक्टरहरू खाना खाएको आधा घन्टापछि मात्र पानी पिउन सल्लाह दिन्छन् । ३० मिनेटको अन्तरालमा शरीरमा अलग–अलग पाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको हुन्छ । त्यसपछि पानीले पाचन प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पार्दैन । यससम्बन्धमा अझ बढी जानकारी लिनका लागि पोषणविद्सँग सम्पर्क गर्नुहोला ।
दैनिक दही खानाले पाचन प्रक्रियामा समेत मद्दत पुर्याउने गर्दछ।
छोराको शव लिएर मंगलबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेका उजिरबहादुरले भने
काठमाडौँ — सुनौलो सपना लिएर साढे चार वर्षअघि दक्षिण कोरिया पुगेका २४ वर्षीय बिमन राईको शव मंगलबार स्वदेश ल्याइपुर्‍याइएको छ । ओखलढुंगा सेवा समाज दक्षिण कोरिया र दूतावासको पहलमा शव ल्याइएको हो । ओखलढुंगाको मानेभन्ज्याङ–६ हिलेपानीका उनी चार वर्षअघि ईपीएसमार्फत रोजगारी गर्न कोरिया पुगेका थिए ।
छोराको शव लिएर मंगलबार अपराह्न त्रिभुवन विमानस्थल आइपुगेका उजिरबहादुरले भने, ‘मेरो छोराले जस्तो कसैले अर्काको देशमा ज्यान गुमाउन नपरोस् ।’
अण्डा खान जान्नुभयो भने सुगर, कलेजोको रोग लाग्न नदिने मात्र हैन थप यस्ता ७ फाइदा हुनेछन्
के हो ‘होलबडी’ चेकअप ? यसमा के-के जाँच गरिन्छ? कुन अस्पतालमा कति शुल्क लाग्छ ? जान्नुहोस
१५ भन्दा बढी औषधीको काम गर्छ घ्यूकुमारीले,अनिवार्य घरमा रोप्नुहोस सोभा पनि दिन्छ